रामकुमारी झाँक्री : आन्दोलनमा सफल, मन्त्रीको अग्निपरीक्षा सुरु !
काठमाडौं । नेपालमा नेताको चाकडी गरेको लाभको पद लिनेको संख्या धेरै छ । तर संघर्षको मैदानबाट रक्तमुच्छेल हुँदै खारिएर आएकी रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री बनेकिछन् । उनी नेपाली राजनीतिमा ‘बागी’ पात्र पनि हुन् । गणतन्त्रको आन्दोलनमा मैदानमा उत्रिँदा तत्कालीन शाही सत्ताले रक्तमुच्छेल हुनेगरी घाइते बनाएको थियो । भने दुई दुई पटक आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा सडक संघर्षमै उत्रिएर विरोध गरिन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सिंहासनबाट बालकोटको ‘बार्दली’सम्म पु¥याउनका लागि उनको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ । उनले आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारीलाई औंला ठड्याएर चुनौती दिँदा प्रहरी हिसारतसम्म पुग्नुपरेको थियो । तर उनी कहिल्यै निराश बनिनन् बरु संघर्षको मैदानबाट जनताको पक्षमा उभिनका लागि अहोरात्र खटिइनन् । ओलीलाई जति सच्याउन खोज्दा पनि नसकेपछि आफ्नै जोडबलमा एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाइनन् ।
एमालेभित्रको ओली गूटको सधै तारो बनिन् । अत्यचार र अपराध नहसने झाँक्री कसैको बैशाखी टेकेरभन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिएर अघि बढ्ने हिम्मत राख्छिन् । झाँक्री ०३४ सालमा गुल्मीको तत्कालिन म्यालपोखरी गाविस हाल मदाने गाउँपालिकामा जन्मेकी हुन् । उनी बुबा रत्नबहादुर र आमा रनकुमारी झाँक्रीको कोखबाट जन्मेकी हुन् । उनको राजनीतिक यात्रा ‘विद्रोही’ नै छ । ०५४ सालमा विद्रोही पार्टी रोजेकी थिइन् ।
उनको त्यो यात्रा अहिलेसम्म जारी छ । ०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा नेकपा (माले) रोजिन् । उनी त्यो समयमा विद्यार्थी राजनीतिमा थिइन् । उनले माध्यमिक तहको शिक्षा पृथ्वी मावि पुर्कोटदहबाट पढेकी हुन् । आइए काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, विए पद्मकन्या क्याम्पस र एम त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पुरा गरेकी हुन् ।
सानै उमेरदेखि राजनीतिमा चासो राख्ने उनी पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको प्रारम्भिक कमिटीमा पहिलोपटक सदस्य भएकी हुन् ।
अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य, महिला विभाग प्रमुख, प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै पोखरामा भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा विजयी भएकी हुन् । ०६५ सालमा अनेरास्ववियुको इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष पनि झाँक्री नै हुन् । उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी गोकुल घर्ती ७ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
त्यसपछि उनी सधै राजनीतिको केन्द्रमै रहिन् । राजनीतिमा प्रखर बोल्ने महिला नेता झा‌क्री पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिव छन् । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । राजनीति जीवनमा उनले पटकपटक हिरासतमा बसेकी छन् । जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भएर अस्पतालको वेडसम्म पुगेकी छन् ।
पछिल्लोपटक तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल ०७७ माघ १६ गते गोरखाको सिरान चोकमा भएको कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषयमा बोलिन् । त्यहि विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । उनलाई प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गर्यो । एक दिनभर प्रहरी हिरासतमा बसेर बाहिर निस्किइन् ।
उनको पक्राउविरुद्ध पार्टीभित्र मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मी, नागरिक अगुवालगायत जनस्तरबाटै चर्को आवाज उठ्यो । नागरिकको स्वतन्त्रता हक हनन् भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भयो । उनलाई सरकारले उनकै घरबाट गिरफ्तार गरेको थियो । ०५४ मा एमाले विभाजन हुँदा उनी नेतृत्वमा थिइनन् । अहिले ०७८ सालमा एमाले विभाजन हुँदा नेतृत्व तहमा छिन् । ०५४ सालमा मालेमा लागेकी झाँक्री वामदेव गौतमसँग ०५८ सालमा एमालेमा फर्किएकी थिइन् ।
केही समयमा पत्रकारितामा सक्रिय भएपनि राजाको निरंकुश शासन सुरु भएसँगै उनी निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा जोडिइन् । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रुपमा झाँक्री अग्रमोर्चामा उभिइन् ।जनआन्दोलनमा प्रहरीले प्रहार गरेको लाठी लागेर रगतपच्छे भएको उनको तस्बिर पुरै जनआन्दोलनको एउटा प्रतिकात्मक तस्बिर रुपमा रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनकी ‘पोस्टर गर्ल’ को रुपमा उनी थप चिनिइन् ।
ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनाव बहिष्कारका लागि सहरमा विद्यार्थी संगठनहरूले टोलटोलमा अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमा पनि झाँक्रीको सक्रियता थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले विद्यार्थी नेताहरूको रुपमा उनलाई स्थापित गरायो ।०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी झाँक्री प्रतिनिधिसभाको सांसद बनिन् । ०७५ सालमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा उनी केन्द्रीय सदस्य नै रहिन् ।
नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा ५ पुस ०७७ मा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनका विरुद्ध पार्टी भित्रबाट नै सडक आन्दोलन भयो । ६६ दिनसम्म मुलुकभर आन्दोलन चर्कियो । त्यसको अग्रपंक्तिमा झाँक्री पनि थिइन् । त्यसैले ओलीको शासनकालमा झाँक्री सरकारको निशानामा परिन् ।
ओलीका एकपछि अर्को कदमलाई आँखा चिम्लेर साथ दिने राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनेकी थिइन् ‘राष्ट्रपतिको कुरा त के गर्नु ? म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु, निर्वाचनको तयारीका लागि सुखसुविधा ऐशआराम छाडेर शितलनिवास छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुहोस्, चाबहिल कि कता बानेश्वतिर बसाइ छ भन्ने सुन्या छु, होइन भने बालकोटै गएपनि हुन्छ ।’
उनको यो भनाइले ‘महिला राष्ट्रपति’ को मानहानी भएको भन्दै उनकै पार्टीको भातृ संगठन अनेमसंघले कारबाहीको माग ग¥यो ।
राष्ट्रपतिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर २०७७ माघ २९ गते झाँक्रीलाई बुद्धनगरको घरबाट पक्राउ गर्यो ।उनी अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव हुन । उनी विद्यार्थी आन्दोलन, सडक आन्दोलन देखि मन्त्री बनेकी छिन् । झाँक्री निडर तथा आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने नेतृको रुपमा आफुनो परिचय बनाएकी छन् ।
शुक्रबार २२, असोज २०७८ १७:१०:४३ मा प्रकाशित